Accor waxay leedahay jawaab bilaash ah COVID-19: Dhakhtar dalwad ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Accor waxay leedahay jawaab bilaash ah COVID-19: Dhakhtar dalwad ah
Wararka Australia • Jebinta Wararka Faransiiska Polynesia • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • France Breaking News • Investments • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Laga bilaabo maanta, dhammaan martida hudheelka Accor ee Australia, New Zealand iyo French Polynesia waxay marin u heli doonaan shabakad kumanaan ah oo aqoonyahanno caafimaad oo la aqoonsan yahay 24/7 iyada oo loo marayo la-talin-caafimaad si looga caawiyo xaalad kasta oo caafimaad oo ka dhalata inta ay joogaan.
Adeeggan caafimaad ee bilaashka ah ayaa lagu dabaqi karaa baahi kasta oo caafimaad oo aan degdeg ahayn wuxuuna ku habboon yahay, laakiin aan ku xaddidnayn, welwelka Covid-19 maadaama ay u oggolaanayso martida inay helaan talo caafimaad oo ay ku helayaan raaxada qolkooda.
Accor waxay hadda siineysaa telefishanno caafimaad oo khibrad u leh martida deggen hudheelada Accor, meelaha dalxiisyada iyo guryaha dabaqyada ah iyada oo loo marayo iskaashiga cusub ee ay la leedahay AXA, oo ah hoggaamiye caalami ah ee caymiska iyo xalalka telemedicine.
Simon McGrath, COO ee Accor Pacific, ayaa faallo ka bixiyay, “Ujeedkeenu waa mid aad u fudud - inaan daryeelno oo aan daryeelo mid kasta oo ka mid ah martidayada qiimaha leh.
Sidoo kale helitaanka soo dhaweyn diiran oo aamin ah hudheel Accor, goob dalxiis ama aqal, iskaashigeena AXA wuxuu ka caawin doonaa martideena adoo siinaya si dhakhso leh oo sahlan oo talo caafimaad ah. Waxaan rajeyneynaa in qorshahan uu keenayo nabada maskaxda.
Accor waxay mudnaanta siineysaa amniga martidiisa maalin kasta in ka badan 50 sano, iyada oo ay ugu wacan tahay heerarkeeda sare ee nadaafadda iyo nadaafadda lagu dabaqay dhammaan hoteeladeeda adduunka.
Sababtoo ah cudurka faafa ee Covid-19 iyo in la hubiyo amniga martida iyo xubnaha kooxda, Accor wuxuu sare u qaaday xeerarkan xitaa horraantii sannadkan isagoo bilaabay sumcadiisa nadaafadda iyo ka hortagga, ALLSAFE, oo leh qaar ka mid ah heerarka ugu adag ee nadaafadda iyo borotokoollada hawlgalka adduunka martigelinta si loo hubiyo in dadku heli doonaan xasillooni maskaxeed markay la joogaan Accor.
Waxaa jira 16 borotokollo dheeri ah, oo uu kujiro Sarkaalka ALLSAFE ee huteel walba, tababar dheeri ah oo xubnaha kooxda ah, iyo hab maamuus nadaafadeed oo sare loo qaaday oo ay kamid yihiin adeegsiga alaab heer caafimaad ah oo looyaqaano dila viruska.
Sannadkan, kooxaha Accor waxay sidoo kale si aad ah uga qayb qaateen bixinta daryeelka karantiil ama soocidda martida, hoyga shaqaalaha safka hore, iyo baakadaha cuntada ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka, iyo sidoo kale bulshooyinka maxalliga ah.
Accor waxay sidoo kale hoy siisay dadka hoylaawayaasha ah iyo xubnaha kale ee bulshada ee nugul kuwaas oo u baahday hoy inta lagu jiro dhibaatada.